Gobol Maraykanka ka tirsan oo Dedaal ugu jira Ansixinta Xeer jidaynaya in 100-sanno jir lagu bilaabo Cabbista Sigaarka | Himilo Media Group
Gobolka Hawaii ee Dalka Maraykanka ayaa dadka ku nool waxa lagu qasbayaa in ay cabbista sigaarka sugaan muddo dheer haddiba la ansixiyo xeer uu soo bandhigay xilidhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee gobolkaasi .
Xeerkan ayaa waxa uu dhigayaa in dadka ku dhaqan gobolkaasi ay cabbista sigaarka bilaabi karaan marka ay da’doodu gaadho 100 jir, haddii xeerkaasi uu meel maro waxa ku dhaqankiisa la hir galin doonaa muddo shan sano ah, taas oo ku beegan in xeerkaa ku dhaqankiisu uu bilaabmi doono sanadka 2024ka. Waxaanay ujeeddada ka dambaysaa noqonaysaa in guud ahaanba gobolkaas laga cidhib-tiro cabbista sigaarka.
Xildhibaanka xeerkan soo bandhigay oo magiciisa la yidhaahdaa Richard oo bartay cilmiga dhakhtarnimada, waxa uu dedaal ugu jiraa sidii guud ahaan ba Tubaakada lagu isticmaalo gobolkaasi looga joojin lahaa .
Gobolka Hawaii ayaa haatan ah gobolka ugu xakamaynta badan dhinaca ganacsiga iyo iibka sigaarka waxaana haatan da’da ugu wayn ee qofka ku dhaqan gobolkaasi uu ku iibsan karaa ay tahay da’da 21 jirka, waxase xeerkani soo jeedinayaa in shantaasi sano ee soo socda sanad walba kor loo qaado da’da uu qofku ku iibsan karo sigaarka ilaa 100 jir laga gaadhsiinayo sanadka 2024ka.